UYesu Kristu—UKumkani OnguMesiya Ubuyisela Okusesikweni | Sondela
UYesu ‘Umisa Okusesikweni Emhlabeni’
1, 2. Sisiphi isihlandlo awaba nomsindo ngaso uYesu, yaye ngoba?
UYESU wayebonakala enomsindo—yaye wayenesizathu esivakalayo. Usenokukufumanisa kunzima ukumthelekelela ekwimeko enjalo, kuba wayengumntu onobulali. (Mateyu 21:5) Noko ke, wakwazi ukuzibamba, kuba umsindo wakhe wawungowobulungisa. * Kodwa yintoni le yamcaphukisa kangaka lo mntu uthanda uxolo? Yayikukungabikho kokusesikweni okugqithiseleyo.
2 Itempile yaseYerusalem yayixabisekile kuYesu. Ehlabathini lonke, yiyo kuphela eyayiyindawo engcwele eyayisetyenziselwa ukunqula uYise wasezulwini. AmaYuda awayevela kumazwe amaninzi ayehamba imigama emide esiya kunqula apho. KwaneeNtlanga ezihlonela uThixo zazisiza, zingene kwintendelezo yetempile eyayilungiselelwe zona. Kodwa ekuqaliseni kwakhe ubulungiseleli bakhe, uYesu wangena etempileni waza wabona into engamasikizi. Yayifana nendawo yezorhwebo kunokuba ifane nendlu yonqulo! Yayizaliswe ngabarhwebi nangabatshintshi bemali. Yintoni eyayingekho sikweni kuloo nto? Aba bantu babeyigqala itempile kaThixo njengendawo nje yokuxhaphaza abantu—kwanokubaphanga. Babekwenza njani oko?—Yohane 2:14.
3, 4. Kukuphi ukuxhaphaza kokubawa okwakusenziwa endlwini kaYehova, yaye yintoni awayenzayo uYesu ukulungisa loo meko?
3 Iinkokeli zonqulo zamisela umthetho wokuba luhlobo olunye kuphela lwengqekembe eyayinokusetyenziselwa ukuhlawula irhafu etempileni. Iindwendwe zazimele ziyitshintshe imali yazo ukuze zifumane loo ngqekembe. Ngoko abatshintshi bemali babebeka iitafile zabo ngaphakathi etempileni, bezihlawulisa ngemali nganye eziyitshintshayo. Ishishini lokuthengisa izilwanyana nalo lalinengeniso enkulu. Iindwendwe ezazifuna ukunikela imibingelelo zazinokuthenga nakuwuphi na umrhwebi osesixekweni, kodwa amagosa asetempileni ayesenokuyigatya imibingelelo yazo njengengafanelekanga. Noko ke, imibingelelo eyayithengwa apho etempileni yayisamkeleka ngokuqinisekileyo. Ekubeni abantu babenyanzelekile ukuthenga kubo, maxa wambi abo barhwebi babewanyusa kakhulu amaxabiso abo. * Oku kwakukubi ngakumbi kunenkqatho nje yezorhwebo. Yayikukuphanga!
“Zisuseni ezi zinto apha!”
4 UYesu wayengenakukunyamezela ukungabikho kokusesikweni okunjalo. Le yayiyindlu kaYise! Wenza iziniya ngentsontelo waza wayikhupha imihlambi yeenkomo neyeegusha eyayisetempileni. Emva koko waya kubatshintshi bemali waza wazibhukuqa iitafile zabo. Khawube nomfanekiso-ngqondweni wazo zonke ezo ngqekembe zithe saa phantsi! Wabayalela ngokungqongqo abo bantu babethengisa amahobe esithi: “Zisuseni ezi zinto apha!” (Yohane 2:15, 16) Kubonakala ukuba, akukho namnye owaba nobuganga bokumelana nesi senzo sakhe senkalipho.
UNyana Wayefana NoYise
5-7. (a) Ubomi bukaYesu bangaphambi kokuba ngumntu bayiphembelela njani ingcamango yakhe yokusesikweni, yaye yintoni esinokuyifunda ngokuhlolisisa umzekelo wakhe? (b) UKristu walwa njani nxamnye nokungekho sikweni okubandakanya ulongamo negama likaYehova?
5 Kambe ke, abo barhwebi baphinda babuya. Malunga neminyaka emithathu kamva, uYesu waphinda wathetha ngokungabikho kokusesikweni okufanayo, ngesi sihlandlo ecaphula amazwi kaYehova uqobo xa wayekhalimela abo babeyenza indlu Yakhe ‘umqolomba wabaphangi.’ (Mateyu 21:13; Yeremiya 7:11) Ewe, xa uYesu wakubonayo ukuxhatshazwa kwabantu nokungcoliswa kwetempile kaThixo, wavakalelwa kanye ngendlela noYise awavakalelwa ngayo. Yaye akumangalisi oko! Kangangamawaka angenakubalwa eminyaka, uYesu wayefundiswa nguYise wasemazulwini. Ngoko ke, wayezaliswe yingcamango kaYehova yokusesikweni. Ngengqiqo yokoqobo, wayefana noyise. Ngoko ukuba sifuna ukuluqonda kakuhle uphawu lukaYehova lokusesikweni, eyona ndlela ibhetele yokwenjenjalo kukondela umzekelo kaYesu Kristu.—Yohane 14:9, 10.
6 UNyana kaYehova okuphela kozelweyo wayekho xa ngokungekho sikweni uSathana wabiza uYehova uThixo ngokuba lixoki waza wakucel’ umngeni ukulunga kolawulo Lwakhe. Olunjani lona ugculelo! Kwakhona lo Nyana wasiva isimangalo sikaSathana sokuba akukho bani wayenokumkhonza ngokungazingci uYehova, ngokuqhutywa luthando. Ngokuqinisekileyo ezi zimangalo zobuxoki zayenza buhlungu intliziyo elungileyo yalo Nyana. Hayi indlela amele ukuba wavuya ngayo akufumanisa ukuba wayeza kuba nendima eyintloko ekulungiseni loo meko! (2 Korinte 1:20) Wayeza kukwenza njani oko?
7 Njengoko sifundile kwiSahluko 14, uYesu Kristu wanikela impendulo epheleleyo kwizimangalo zikaSathana zokusingela phantsi ingqibelelo yezidalwa zikaYehova. Ngaloo ndlela uYesu wabeka isiseko sokuthethelelwa kokugqibela kolongamo lukaYehova nesokungcwaliswa kwegama Lakhe. NjengoMmeli Oyintloko kaYehova, uYesu uza kumisela okusesikweni kobuthixo kwindalo iphela. (IZenzo 5:31) Kwanobomi bakhe basemhlabeni babonisa okusesikweni kobuthixo. UYehova wathi ngaye: “Ndiza kufaka umoya wam kuye, yaye okusesikweni uya kukwenza kucace ezintlangeni.” (Mateyu 12:18) Wawazalisekisa njani uYesu loo mazwi?
UYesu Ucacisa “Okusesikweni”
8-10. (a) Imithetho yomlomo yeenkokeli zonqulo zamaYuda yakukhuthaza njani ukujongelwa phantsi kwabantu abangengomaYuda kunye namabhinqa? (b) Imithetho yomlomo yawenza njani waba luxanduva umthetho kaYehova weSabatha?
8 UYesu wayewuthanda uMthetho kaYehova yaye wayephila ngokuvisisana nawo. Kodwa iinkokeli zonqulo zomhla wakhe zawugqwetha loo Mthetho. UYesu wathi kuzo: “Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! . . . Niye nayigatya imibandela enzima ngakumbi yoMthetho, eyile, okusesikweni nenceba nokuthembeka.” (Mateyu 23:23) Ngokucacileyo, abo bafundisi boMthetho kaThixo babengakucacisi “okusesikweni.” Kunoko, babekusingela phantsi okusesikweni kobuthixo. Njani? Khawuqwalasele le mizekelo imbalwa.
9 UYehova wabayalela abantu bakhe ukuba bazahlule kwiintlanga zabahedeni ezazibajikelezile. (1 Kumkani 11:1, 2) Noko ke, ezinye iinkokeli zonqulo ezazinenzondelelo egqithiseleyo zazikhuthaza abantu ukuba babathiye bonke abantu abangengomaYuda. IMishnah ide iquke lo mthetho othi: “Iinkomo azinakushiywa kwiindawo zokutyelela zabantu beentlanga ekubeni berhanelwa ngokuba neentlobano zesini nezilwanyana.” Ukuba nomkhethe ngaloo ndlela kubo bonke abantu abangengomaYuda kwakungekho sikweni yaye kwakungqubana noMthetho kaMoses. (Levitikus 19:34) Eminye imithetho yabantu yayiwasingela phantsi amabhinqa. Umthetho womlomo wawusithi umfazi ufanele ahambe emva kwendoda yakhe, kungekhona ecaleni kwayo. Indoda yayingafanele incokole nebhinqa esidlangalaleni, kuquka umfazi wayo. Njengamakhoboka, amabhinqa ayengavumelekanga ukuba anikele ubungqina enkundleni yamatyala. Kwakukho nomthandazo wamadoda wokubulela uThixo kuba engengomabhinqa.
10 Iinkokeli zonqulo zawuthabathel’ indawo uMthetho kaThixo ngemithetho nangemimiselo yabantu. Ngokomzekelo, umthetho weSabatha wawusalela nje kuphela ukuba kungasetyenzwa ngeSabatha, lubekelwe bucala olo suku ukwenzela unqulo, ukuzihlaziya ngokomoya, nokuphumla. Kodwa abaFarisi bawenza waba luxanduva loo mthetho. Babagqibela ngokwabo abantu ukuba yintoni egqalwa ‘njengomsebenzi.’ Bamisela uludwe lweentlobo ezingama-39 zomsebenzi, njengokuvuna okanye ukuzingela. Olu ludwe lwabangela uthotho lwemibuzo. Ukuba umntu wayetyoba intakumba ngeSabatha, ngaba wayezingela? Ukuba wayexhwitha ingqolowa ngesandla endleleni ukuze atye, ngaba wayevuna? Ukuba wayenyanga umntu ogulayo, ngaba wayesebenza? Imibuzo enjalo yayiphendulwa ngokumiselwa kwemithetho engqongqo neneenkcukacha.
11, 12. UYesu wakuvakalisa njani ukuzichasa kwakhe izithethe ezingezozazibhalo zabaFarisi?
11 Kwimeko elolo hlobo, uYesu wayeza kubanceda njani abantu bakuqonde okusesikweni? Ngeemfundiso zakhe nangendlela awayephila ngayo, wamelana ngenkalipho nezo nkokeli zonqulo. Khawuqwalasele kuqala ezinye zeemfundiso zakhe. Wayigxeka ngokungqalileyo imithetho yazo emininzi, esithi: “Niyalitshitshisa ilizwi likaThixo ngesithethe senu eniye nasinikela.”—Marko 7:13.
12 Ngenkalipho uYesu wafundisa ukuba abaFarisi babephambukile kumthetho weSabatha—eneneni, babeyiphose ngokupheleleyo eyona ntsingiselo yaloo mthetho. Wachaza ukuba, uMesiya “uyiNkosi yesabatha” yaye ke ngoko wayenelungelo lokuphilisa abantu ngeSabatha. (Mateyu 12:8) Ukuze ayigxininise le ngongoma, waphilisa ngokungummangaliso esidlangalaleni ngeSabatha. (Luka 6:7-10) Oko kuphilisa kwakufuzisela ukuphilisa kwakhe emhlabeni wonke ebudeni boLawulo lwakhe Lwewaka Leminyaka. Lona ngokwalo elo Waka Leminyaka liya kuba yiSabatha enkulu, ekuya kuthi kuyo lonke uluntu oluthembekileyo ekugqibeleni luphumle kubukhoboka beenkulungwane besono nokufa.
13. Nguwuphi umthetho owabakho ekubugqibeni kukaKristu ubulungiseleli bakhe basemhlabeni, yaye wawahluke njani kulowo wawungaphambi kwawo?
13 Kwakhona uYesu wakucacisa okusesikweni ngokuthi kumiselwe umthetho omtsha, “umthetho kaKristu,” emva kokubugqiba kwakhe ubulungiseleli bakhe basemhlabeni. (Galati 6:2) Ngokungafaniyo noMthetho kaMoses obungaphambi kwawo owawuluthotho lwemimiselo ebhaliweyo, lo mthetho mtsha wawuxhomekeke kumgaqo. Enyanisweni, wawunayo imiyalelo ethile engqalileyo. Omnye wayo uYesu wawubiza ngokuthi “umyalelo omtsha.” UYesu wafundisa bonke abalandeli bakhe ukuba bathandane kanye njengokuba naye wabathandayo. (Yohane 13:34, 35) Ewe, uthando lokuzincama lwalufanele lube luphawu olubalaseleyo lwabo bonke abo baphila ngokuvisisana ‘nomthetho kaKristu.’
Ukumisela Umzekelo Wokusesikweni
14, 15. Wabonisa njani uYesu ukuba wayeyiqonda imida yegunya lakhe, yaye kutheni kukhuthaza nje oku?
14 UYesu wenza okungakumbi kunokufundisa ngothando. Wayephila ngokuvisisana ‘nomthetho kaKristu.’ Wawuyinxalenye yobomi bakhe. Khawuqwalasele iindlela ezintathu umzekelo kaYesu owakucacisa ngayo okusesikweni.
15 Okokuqala, uYesu wakuphepha ngenyameko ukwenza okungekho sikweni. Mhlawumbi uye waphawula ukuba okungekho sikweni okuninzi kwenziwa xa abantu abangafezekanga besiba nekratshi baze badlulele ngaphaya kwemida yegunya labo. UYesu akazange akwenze oko. Ngesinye isihlandlo, enye indoda yeza kuYesu yaza yathi: “Mfundisi, xelela umntakwethu ahlulelane nam ngelifa.” Wasabela njani uYesu? “Mntundini, ngubani na ondimisele ukuba ngumgwebi okanye umahluli phezu kwenu?” (Luka 12:13, 14) Ngaba akumangalisi oko? Ubukrelekrele bukaYesu, ingqiqo yakhe, kwanegunya lakhe alinikwe nguThixo lalingaphezu kwelakhe nawuphi na umntu emhlabeni; ukanti, wala ukuwungena lo mbandela, ekubeni wayenganikwanga gunya lokwenjenjalo. UYesu wayesoloko ethozamile ngale ndlela, kwanasebudeni bamawakawaka eminyaka ngaphambi kokuphila kwakhe njengomntu. (Yude 9) Kuthetha lukhulu ngoYesu ukukholosa kwakhe ngokuthobekileyo ngoYehova ukuba amisele oko kusesikweni.
16, 17. (a) UYesu wakubonisa njani okusesikweni ekushumayeleni kwakhe iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo? (b) UYesu wabonisa njani ukuba imbono yakhe ngokusesikweni yayiyeyenceba?
16 Okwesibini, uYesu wabonisa okusesikweni ngendlela awazishumayela ngayo iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. Akazange akhethe buso. Kunoko, wazabalazela ngokunyanisekileyo ukufikelela zonke iindidi zabantu, enoba babezizityebi okanye bengamahlwempu. Kanti bona abaFarisi babebagatya abantu abangamahlwempu, bebabiza ngegama lendelelo elithi ʽam-ha·ʼaʹrets, okanye “abantu belizwe.” UYesu wakulungisa ngenkalipho ukungabikho kokusesikweni okunjalo. Xa wayefundisa abantu iindaba ezilungileyo—naxa wayesitya nabantu, ebondla, ebaphilisa, okanye ade abavuse—wayebonakalisa okusesikweni kukaThixo ofuna ukufikelela “zonke iintlobo zabantu.” *—1 Timoti 2:4.
17 Okwesithathu, imbono kaYesu ngokusesikweni yayiyeyenceba. Wenza umzamo wokubanceda aboni. (Mateyu 9:11-13) Wayekulungele ukunceda abantu ababengenamandla akuzikhusela. Ngokomzekelo, uYesu akazange athelele iinkokeli zonqulo ekukhuthazeni ukungathenjwa kwazo zonke iiNtlanga. Ngenceba wazinceda waza wazifundisa ezinye zazo, nangona wayethunywe ngokuyintloko kubantu bakwaYuda. Wavuma ukuphilisa xa wacelwa ligosa lomkhosi elingumRoma, esithi: “Andifumananga lukholo lukhulu kangaka nakubani na kwaSirayeli.”—Mateyu 8:5-13.
18, 19. (a) UYesu wasiphakamisa ngaziphi iindlela isidima samabhinqa? (b) Umzekelo kaYesu usinceda njani sibone indlela inkalipho enxulumene ngayo nokusesikweni?
18 Ngokufanayo, uYesu akazange ayixhase indlela ayejongwa ngayo amabhinqa. Kunoko, ngenkalipho wenza okusesikweni. Amabhinqa angamaSamariya ayegqalwa njengangahlambulukanga njengeeNtlanga. Ukanti, uYesu akazange abe mathidala ukushumayela kumSamariyakazi kwiqula laseSikare. Eneneni, leli bhinqa uYesu awazichaza kulo okokuqala njengoMesiya othenjisiweyo. (Yohane 4:6, 25, 26) AbaFarisi babesithi amabhinqa ayengafanele afundiswe uMthetho kaThixo, kodwa uYesu wachitha ixesha elininzi namandla akhe efundisa amabhinqa. (Luka 10:38-42) Yaye nangona kwakukho inkolelo yokuba amabhinqa ayengenakunikela ubungqina obuthembekileyo, uYesu wawaphatha ngesidima amabhinqa ngokuwanika ilungelo lokuba ngawokuqala ukumbona emva kokuvuswa kwakhe. Wada wawaxelela ukuba aye kuchazela abafundi bakhe abangamadoda ngesi siganeko sisesona sibalulekileyo!—Mateyu 28:1-10.
19 Ewe, uYesu wakucacisa okusesikweni ezintlangeni. Kwiimeko ezininzi, wayede abeke ubomi bakhe esichengeni ngenxa yokwenza oko. Umzekelo kaYesu usinceda sibone ukuba ukubonisa okusesikweni kokwenyaniso kufuna inkalipho. Ngokufanelekileyo, wayebizwa ngokuba ‘yiNgonyama yesizwe sikaYuda.’ (ISityhilelo 5:5) Khumbula ukuba ingonyama ingumqondiso wenkalipho yokusesikweni. Noko ke, kwixesha elingekude elizayo uYesu uza kukubonakalisa nangakumbi okusesikweni. Uza kukumisela “okusesikweni emhlabeni” ngengqiqo epheleleyo.—Isaya 42:4.
UKumkani OnguMesiya ‘Umisa Okusesikweni Emhlabeni’
20, 21. Kwixesha lethu, uKumkani onguMesiya uye wakukhuthaza njani okusesikweni emhlabeni wonke ebandleni lamaKristu?
20 Ukususela ekumiselweni kwakhe njengoKumkani onguMesiya ngowe-1914, uYesu uye wakhuthaza okusesikweni emhlabeni. Ukwenze njani oko? Uye waxhasa ukuzaliseka kwesiprofeto esifumaneka kuMateyu 24:14. Abalandeli bakaYesu basemhlabeni baye bafundisa abantu emazweni onke inyaniso ngoBukumkani bukaYehova. NjengoYesu, baye bashumayela ngokungenamkhethe nangokusesikweni, befuna ukunika wonk’ ubani—oselula okanye okhulileyo, osisityebi okanye olihlwempu, oyindoda okanye olibhinqa—ithuba lokumazi uYehova, uThixo wokusesikweni.
21 Kwakhona uYesu ukhuthaza okusesikweni ebandleni lamaKristu, ayiNtloko yalo. Njengoko kwakuprofetiwe, usinika “izipho ezingabantu,” abadala abathembekileyo abangamaKristu abakhokelayo ebandleni. (Efese 4:8-12) Ekwaluseni kwabo umhlambi kaThixo oxabisekileyo, aba bantu balandela umzekelo kaYesu Kristu ekukhuthazeni okusesikweni. Basoloko bekhumbula ukuba uYesu ufuna ukuba izimvu zakhe ziphathwe ngokusesikweni—kungakhathaliseki isigxina, ukuduma, okanye iimeko zazo ngokwezinto eziphathekayo.
22. Uvakalelwa njani uYehova ngokuxhaphaka kokungekho sikweni kwihlabathi lanamhlanje, yaye umisele uNyana wakhe ukuba enze ntoni ngako?
22 Noko ke, kwixesha elikufuphi elizayo uYesu uza kumisa okusesikweni emhlabeni ngendlela ebalaseleyo. Okungekho sikweni kuxhaphakile kweli hlabathi lonakeleyo. Mntwana ngamnye ofa ngenxa yokungondleki ulixhoba lokungekho sikweni okungathethelelekiyo, ingakumbi xa sicinga ngemali nexesha ezichithelwa ekwenzeni izixhobo zemfazwe nasekuzonwabiseni kokuzingca. Ukufa kwezi zigidi ngokungeyomfuneko nyaka ngamnye kuluhlobo nje olunye phakathi kweentlobo ezininzi zokungekho sikweni, ezithi xa zizonke zivuse ingqumbo kaYehova yobulungisa. Umisele uNyana wakhe ukuba alwe imfazwe yokusesikweni nxamnye nayo yonke le nkqubo ingendawo yezinto ukuze akuphelise ngonaphakade konke okungekho sikweni.—ISityhilelo 16:14, 16; 19:11-15.
23. Emva kweArmagedon, uKristu uza kukukhuthaza njani okusesikweni ngonaphakade?
23 Noko ke, ukuba sesikweni kukaYehova kubandakanya okungakumbi kunokutshabalalisa nje abangendawo. Kwakhona umisele uNyana wakhe ukuba alawule ‘njengeNkosana yoXolo.’ Emva kwemfazwe yeArmagedon, ulawulo lukaYesu luza kumisela uxolo emhlabeni wonke, yaye uza kulawula “ngokusesikweni.” (Isaya 9:6, 7) Ngoko uYesu uza kuyoliswa kukuphelisa konke okungekho sikweni okuye kwabangela intlungu nokubandezeleka okukhulu kangaka ehlabathini. Uya kuqhubeka ekuxhasa ngonaphakade ukuba sesikweni okugqibeleleyo kukaYehova. Ngoko ke, kubalulekile ukuba sifune ngoku ukuxelisa ukuba sesikweni kukaYehova. Makhe sibone indlela esinokukwenza ngayo oko.
^ isiqe. 1 Ngokubonisa umsindo wobulungisa, uYesu wayexelisa uYehova, ‘obucaphukelayo’ bonke ubungendawo. (Nahum 1:2) Ngokomzekelo, emva kokuba uYehova ebaxelele abantu bakhe abavukelayo ukuba babeyenze indlu yakhe yaba “ngumqolomba nje wabaphangi,” wathi: “Umsindo wam nobushushu bam buthululelwa phezu kwale ndawo.”—Yeremiya 7:11, 20.
^ isiqe. 3 Ngokutsho kweMishnah, ngaloo minyaka kwavuka ingxwaba-ngxwaba ngenxa yokuxhoma kwexabiso lamahobe awayethengiswa etempileni. Ngesiquphe elo xabiso lahliswa phantse ngama-99 ekhulwini! Ngubani owayezuza kakhulu kolu rhwebo lunengeniso engako? Abanye ababhali-mbali bathi olu rhwebo lwasetempileni lwaluququzelelwa nguMbingeleli Omkhulu uAnas, yaye lwayizisela indyebo egqithiseleyo intsapho yakhe.—Yohane 18:13.
^ isiqe. 16 AbaFarisi babebagqala abantu abasweleyo, abangawaziyo uMthetho, ‘njengabaqalekisiweyo.’ (Yohane 7:49) Babesithi abafanele bafundiswe abantu abanjalo yaye akufanele kushishinwe nabo okanye kutyiwe nabo okanye kuthandazwe nabo. Ukuvumela komntu intombi yakhe ukuba itshate nomnye wabo kwakukubi ngaphezu kokuyidlisa ngamarhamncwa asendle. Babebagqala abantu abasweleyo abanjalo njengabangafanelwe lithemba lovuko.
INdumiso 45:1-7 Kutheni sinokuba nentembelo yokuba uKumkani onguMesiya uza kukhuthaza okusesikweni okugqibeleleyo?
Mateyu 12:19-21 Ngokutsho kwesiprofeto, uMesiya wayeza kubaphatha njani abo basweleyo?
Mateyu 18:21-35 UYesu wafundisa njani ukuba okusesikweni kokwenene kuhambisana nenceba?
Marko 5:25-34 UYesu wabonisa njani ukuba ukuba sesikweni kobuthixo kuquka ukunikel’ ingqalelo kwiimeko zomntu ngamnye?
Sinokungenelwa njani kulawulo loBukumkani? Yiva indlela uKumkani onguMesiya asulungekisa, afundisa nalungelelanisa ngayo abalawulwa bakhe.